Posted by PhyoPhyo at Thursday, November 01, 2012 Labels: ဟိုသတင်း ဒီသတင်း
အရင်ကလို ကြွက်သားအက်ရှင်မျိုး နဲ့ ပြန်ပြီးလှုပ်ရှားမယ့် “အာနိုး”
ကယ်လီဖိုးနီးပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတာဝန်နဲ့ နိုင်ငံရေးအက်ရှင်တွေမှာ လှုပ်ရှားနေခဲ့တဲ့ သြစတြီးယန်း၊ အမေရိကန်ရုပ်ရှင်မင်းသား အာနိုးဟာ သူ့ရဲ့ အက်ရှင်ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာ ပြန်ပြီး လှုပ်ရှားတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အသက် ၆၅ နှစ်အရွယ်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ အာနိုးက ဒီနှစ်ထဲ The Expendables2ရုပ်ရှင်နဲ့ အက်ရှင်လောကမှာ သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ၂၀၁၁ နှစ်အထိ အုပ်ချုပ်ရေးမှုးအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပြီး အခု ရုပ်ရှင်ကားသစ် The Last Stand မှာ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားပြန်ပြီး သရုပ်ဆောင်ဦးမှာပါ။ ဒါရိုက်တာက ကိုးရီးယားဒါရိုက်တာ ကမ်ဂျီဝန်းဖြစ်ပြီး The Last Stand ရုပ်ရှင်ရဲ့ ပိုစတာကို Lionsgate က ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ကာတွန်းစာအုပ်စတိုင်လ်ပိုစတာမှာ အသွေးအရောင်စုံစုံလင်လင်နဲ့ အာနိုးရဲ့ ပုံက အလယ်မှာရှိနေတယ်။ ဘေးမှာက သေနတ်သမားတွေက ဗုံးတစ်လုံး ပေါက်ကွဲနေတဲ့သဏ္ဍာန်လို သေနတ်တွေအများကြီးနဲ့ ဒီဇိုင်းမျိုး မြင်တွေရမှာပါ။ အမေရိကန်သမ္မတ ရေဂင်၊ ဘုရ်ှတို့ ခေတ်မှာ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ အက်ရှင်ကားတွေ Predator / Tota Recall / Terminator တို့လို အက်ရှင် ပရိသတ်တွေကို ပြန်ပြီးဖမ်းစားနိုင်ပါဦးမလား။ အာနိုးကတော့ ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော် အိုနေပြီလို့ ခံစားရတယ် တဲ့။ မက္ကဆီကို နဲ့ နီဗားဒါးဒေသမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးဂိုဏ်းတွေကို ဖြိုခွဲရမယ့် ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်း အရာရှိတစ်ဦးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ရမှာပါ။ သူ့ရဲ့ အသက်အရွယ်မှာ ဖြည်းဖြည်းချင်းကြိုးစားရမှာပဲ လို့ ထင်မြင်ယူဆခဲ့ပေမယ့် အဆောက်အဦးတွေပေါ်ခုန်တက်တာ၊ ပေါက်ကွဲမှုကြီးတွေကြားထဲ လှုပ်ရှားရတာ ကားထဲ ပြေးလွှားသတ်ပုတ်၊ လက်သီးတွေပစ်သွင်း ဒီလို အက်ရှင်တွေနဲ့ ပြန်တွေ့ရတာ အံ့အားသင့်စရာပဲ လို့ဆိုတယ်။ "ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လုံး နိုင်ငံရေးလောကမှာ စကားလုံးများများနဲ့ပဲ ပြောဆိုလှုပ်ရှားနေခဲ့ရတယ်။ ဒီလို ကျွန်တော့်ရဲ့ ကျန်နေသေးတဲ့ ကြွက်သားတွေနဲ့ ပြန်ပြီးလှုပ်ရှားရတာ အိုမင်းသလိုခံစားရပေမယ့် စိတ်လှုပ်ရှားအံ့အားသင့်စရာလည်းကောင်းပါတယ်" တဲ့။
ဗူးဒူးမှော်ပွဲတော်မှာ ဟဲဗီးရောခ့်သမားတွေ ဆိုကြ တီးကြတယ်
အမေရိကန်နိုင်ငံ လူဝီစီယားနားပြည်နယ် နယူအော်လိန်းမှာ အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်နေ့ ဟဲလိုးဝင်း ရက်သတ္တပတ်တွေမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဗူးဒူးဂီတ၊ အနုပညာပွဲတော်မှာ အမေရိကန်ဟဲဗီးမက်တယ်အဖွဲ့ Metallica ဟာ မြောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားဒေသက ပန်ခ့် Green Day အဖွဲ့အစား ဖျော်ဖြေတီးခတ်ခဲ့ကြတယ်။ Green Day အဖွဲ့ရဲ့ အဆိုသမား ဘီလီဂျိုးအမ်းစ်ထရောင်း ရဲ့ ကျန်းမာရေးကြောင့်ပါ။ ဟဲဗီးရောခ့်သမားကြီးတွေဟာ ပန့်ခ်အဖွဲ့ကို အကူအညီပေးရမှာမို့ အင်မတန်ပျော်ရွှင်ရတယ်လို့ဆိုတယ်။ Metallica ဂစ်တာသမား ကာ့ခ်ဟမ်းမက်ထ် ကပြောတယ် “ကျွန်တော်တို့လေးဦးသားဆွေးနွေးလိုက်ကြတယ်။ ပြီးတော့ ဆိုမယ် လို့ အားလုံးက တပြိုင်တည်းအော်ဟစ်ပစ်လိုက်တယ်။ ဒါဟာ သိပ်ကောင်းတဲ့ကိစ္စပါ။ ဘီလီဂျိုးကို ကူညီရမှာပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သူငယ်ချင်းပါ။ ကျွန်တော်တို့က Green Day ကို ချစ်တယ်။ သူတို့အတွက် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကူညီနိုင်ပါစေ။ ကျွန်တော်တို့ အမြဲတမ်း ပျော်ရွှင်နေကြမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ အဲဒီ ပန်ခ့်လူငယ်လေးတွေကို သိပ်သဘောကျတယ်” တဲ့။
ဒရမ်သမား လားစ်အူးရစ်ခ်ျ ကလည်း “ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သူငယ်ချင်း Green Day က သူတို့ အဲဒီမှာဖျော်ဖြေမယ့် အစီအစဉ်ကို ကံမကောင်းစွာဖျက်သိမ်းလိုက်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့က သူတို့ရဲ့ ကွက်လပ်နေရာမှာဖြည့်ပေးကြမှာပါ” လို့ ဆိုတယ်။ ဘီလီဂျိုးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့လက လာစ်ဗေးဂက်စ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ iHeartRadio ဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှာ စင်ပေါ်မှာသီဆိုနေရင် ပြိုလဲကျလုလု ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Green Day ရဲ့ ဒရမ်သမား မိုက်ခ်ဒါ့ထ် က ဘီလီဂျိုးရဲ့ ကျန်းမာရေးက အရေးအကြီးဆုံးမို့ ဂီတီဖျော်ဖြေပွဲတွေ ခဏရပ်နားရပါလိမ့်မယ်။ အဖွဲ့ရပ်နားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Green Day ရဲ့ သုံးပိုင်း ပါ အယ်လ်ဘမ် ¡Uno!, ¡Dos!, and ¡Tré! ထဲက ကျန်တဲ့ နှစ်ပိုင်းကို ဆက်ပြီး ထုတ်သွားမှာပါ။ ¡Dos! ကို နိုဝင်္ဘာ ၁၂ နဲ့ ¡Tré! ကို ၂၀၁၃ ဇန်န၀ါရီ ၁၄ မှာ ထုတ်မှာပါ။ လာမယ့် နွေရာသီကာလ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့ မှာလည်း လန်ဒန်က အမ်းမရိတ်ကစားကွင်းကြီးမှာ လန်ဒန်ပရိတ်သတ် ၆ သောင်းကျော်နဲ့ အားပါးတရ တွေ့ကြ ဆိုကြ ပျော်ကြမယ် လို့ သတင်းပါးလိုက်ပါသေးတယ်။
ရုပ်ရှင်မင်းသားတွမ်ဟန့်(စ်)ဟာ အမေရိကန်ဇာတ်ညွှန်းဆရာမ နိုရာအက်ဖရွန် ရဲ့ Lucky Man ဇာတ်လမ်းမှာ လူကြိုက်များတဲ့ သတင်းမျိုးကိုသာ အသားပေးရေးသားတဲ့ သတင်းသမားအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ က ဆုံးပါးခဲ့တဲ့ အက်ဖရွန်နဲ့ ဟန့်(စ်) တို့ဟာ အက်ဖရွန်ရေးသားခဲ့တဲ့ Sleepless in Seattle နဲ့ You’ve got Mail ရုပ်ရှင်တွေမှာ လက်တွဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ ဒီ Lucky Man မှာတော့ ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားထက်မှာ သရုပ်ဆောင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘရော့ဒ်ဝေးပြဇာတ်ခုံပေါ်မှာ ပထမဆုံး သရုပ်ဆောင်မှာပါ။ သတင်းသမား မိုက်ခ်မက်အယ်လ်ရီ ရဲ့ သတင်းသမားဘ၀အတက်အကျ တကယ့်ဘ၀အကြောင်းရေးထားတဲ့ ကဇာတ်မှာ သတင်းသမားအဖြစ် တွမ်ဟန့်စ် ပါဝင်လိမ့်မယ်။ လာ့မယ် ဧပြီလမှာ ကပြမှာဖြစ်ပြီး တွမ်ဟန့်စ် ရဲ့ ပထမဆုံးဘရော့ဒ်ဝေး ကဇာတ်အတွေ့အကြုံပါ။ အက်ဖရွန်ဟာလည်း သူမရဲ့ ဘ၀ကို သတင်းသမားဘ၀နဲ့ စတင်ခဲ့တာပါ။ တွန်ဟန့်စ် ရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုကို ဘရော့ဒ်ဝေးကဇာတ်ခုံပေါ်မှာ အရှင်လတ်လတ် တွေ့ရမှာမို့ ပြဇာတ်ဝါသနာအိုးတွေ စိတ်ဝင်စားလို့နေကြပါတယ်။
စတာလင်ဗိသုကာဆု ရခဲ့တဲ့ သုတေသနအဆောက်အဦးဒီဇိုင်း
ကမ်းဘရစ်ခ်ျတက္ကသိုလ်က ပေါင်၈၂သန်းကုန်ကျခံတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ အပင်သုတေသနစင်တာ ဟာ ယူကေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာအရှိဆုံးဗိသုကာပညာဆုဖြစ်တဲ့ Stirling Prize ရရှိခဲ့တယ်။ စိန်စ်ဘရီ ဓါတ်ခွဲခန်းဟာ မန်ချက်စတာမှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ တော်ဝင်ဗြိတိသျှဗိသုကာ(Riba) အခမ်းအနားမှာ အကောင်းဆုံး အဆောက်အဦးအဖြစ်ရွေးချယ်ပေးခဲ့ကြတယ်။ ဂျုရီလူကြီးတွေက ဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီ စတန်တွန်ဝီလျမ်စ် ရဲ့ အဆောက်အဦးဒီဇိုင်းကို “ဆိတ်ငြိမ်အေးဆေးတဲ့ အလှ” လို့ ချီးမွမ်းကြပါတယ်။ စကာတင်စာရင်းထဲက လန်ဒန်အိုလံပစ်အားကစားကွင်း နဲ့ ဟာ့ပ်ဝေါသ့်ပြခန်း ကိုပါ ကျော်တက်ပြီး ဆုရခဲ့တာပါ။ တခြားစကာတင်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့ အဆောက်အဦးတွေက Belfast’s Lyric Theatre, ဂလက်စ်ဂိုးက မက်ဂီရဲ့ ကင်ဆာရောဂါစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာ လန်ဒန်က Rothschild ဘဏ်တို့လည်း ပါဝင်ကြတယ်။ စိန်စ်ဘရီဓါတ်ခွဲခန်းဟာ နှစ်ထပ်ဆောင်အဆောက်အဦးဖြစ်ပြီး ကမ်းဘရစ်ခ်ျတက္ကသိုလ် ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်အစွန်းနားမှာ တည်ရှိတယ်။ အဲဒီမှာ ရုက္ခဗေဒပညာရှင် ၁၂၀ ဦး က နဲ့ သုတေသနလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်တဲ့။ စတာလင်ဆုပေးပွဲက ဒိုင်လူကြီး ဗိသုကာပညာရှင် ဂျုံးနာက ဗန်ဟေနင်ဂန် က အံ့မခန်းထူးခြားတဲ့အဆောက်အဦးကောင်းဒီဇိုင်း ရဲ့ အရည်အသွေးအပြည့်ရှိတယ် လို့ ဆိုတယ်။ သဘာဝအလင်းရောင်အပြည့်ရရှိတဲ့ ခေတ်မှီဒီဇိုင်းပါ။ အဆောက်အဦးဒီဇိုင်း ကုမ္ပဏီက ပေါင် ၂၀ ၀၀၀ သန်း ဆု ရခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က ဆုရခဲ့တာက လန်ဒန်တောင်ပိုင်း ဘရစ်ဇ်တန်က Evelyn Grace အကယ်ဒမီ secondary ကျောင်းပါ။ ဒီဇိုင်းကတော့ ဗိသုကာပညာရှင် ဇာဟာ ဟာဒစ်ဒ် ရဲ့ ဒီဇိုင်းပါ။
ရှာကီးရား က ပြောတယ် "ပညာရေး နဲ့ အားကစား အလေးထားစရာပါ" တဲ့
လက်တင်အမေရိကသူလေး၊ ပေါပ့်၊ ရောခ့် အက အဆိုကောင်းသူ ရှာကီးရား အောက်တိုဘာ ၁၂ နေ့က အဇာဘိုင်ဂျန်ကို အလည်အပတ်ရောက်တယ်။ အဲဒီမှာ ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးငယ်တွေစုစည်းထားတဲ့ အဖွဲ့တစ်ခုနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ပညာရေးရဲ့ စွမ်းအားအကြောင်းပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ ရှာကီးရားဟာ ယူအန်သံတမန်အဖြစ် အဇာဘိုင်ဂျန်ကို သွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး မြို့တော် ဘာကူမှာ ပြုလုပ်မယ့် သူမရဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲတွေမစခင် ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ ပညာသင်ကြားရေးဟာ ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်။ ကျန်းမာစွာရှင်သန်နေထိုင်နဲ့ ဖို့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား အားကစား ဘယ်လိုလေ့ကျင့်နိုင်မလဲ ဆိုတာတွေ ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ “အားကစားဟာ မိန်းကလေးတွေကို ယောက်ျားလေးတွေလိုပဲ ကျားကျားလျားလျား ရှင်သန်နိုင်စေပါတယ်။ တခြား လူမှုရေးကဏ္ဍာတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့လည်း အခွင့်အလမ်းပိုများနိုင်တယ်။ အားကစားလုပ်ရှားခြင်းဟာ တစ်ဦးချင်းစီအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းပါ။ အားကစားဟာ ပညာရေး လိုပါပဲ။ မိန်းကလေးတွေကို လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ တန်းတူရည်တူကစားသမားတွေအဖြစ် ပါဝင်ကစားနိုင်အောင် ကူညီနိုင်ပါတယ်” လို့ ရှာကီးရား က အားပေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်။
ဖေဖေဒါရိုက်တာ ရုပ်ရှင်မင်းသား ရဲ့ သမီး အဆိုတော်မလေးလား
ဘန်အက်ဖလက် နဲ့ မင်းသမီး ဂျနီဖာ ဂါနာတို့ရဲ့ သမီးလေး ဆာဖီနာဟာ မိဘတွေလိုပဲ သရုပ်ဆောင်ဖို့ လည်း အနုပညာဗီဇပါလာခဲ့ပါတယ်တဲ့။ သုံးနှစ်သမီးလေးဟာ ပေါပ့်သီချင်းတွေကို ခုံမင်နှစ်သက်လှတယ်။ ကနေဒီယန်းပေါပ့်အဆိုတော်မလေး ကာလီရေးဂျက်ဖ်စန် ရဲ့ နာမည်ကြီးသီချင်း Call Me Maybe ကို ဖခင် အက်ဖလက်ကို အမြဲဆိုပြလေ့ရှိသတဲ့။ ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ အမေရိကန် ထိတ်လန့်သည်းဖို အက်ရှင်ကား Argo ရဲ့ ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ဘန်အက်ဖလက် နဲ့ အမေးအဖြေတစ်ခုမှာ သမီးငယ် ဆာဖီနာအကြောင်းကို ပြောပြသွားခဲ့တယ်။ Argo ရုပ်ရှင် ကိစ္စတွေနဲ့ နယူယောက်မှာရှိနေတုန်း အချိန်အားရရင် အက်ဖလက်က အိမ်ကိုဖုန်းခေါ်ပါသတဲ့။ ဂါနာမရှိလို့ သမီးတွေ ဗိုင်အိုလက် နဲ့ ဆာဖီနာတို့နဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ “ကျွန်တော်က မေးပါတယ်။ အဖေ့ရဲ့ ခြောက်နှစ်သမီးနဲ့ စကားပြောနိုင်မလားဆိုတော့ ဟုတ်ကဲ့ လို့ဆိုတယ်။ ပြီးတော့ ဗိုင်အိုလက်နဲ့ စကားတွေပြောကြတယ်။ ပြီးတော့ နောက်တစ်ယောက် ပိုငယ်တဲ့ကလေးမနဲ့ စကားပြောနိုင်မလားဆိုတော့ အငယ်လေး ဖုန်းကိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းကိုင်ကိုင်ချင်းပဲ “ဟေး ပါပါး .. ငါ ခုမှပဲ မင်းကို တွေ့ရတော့တယ်။ အဲဒါ ရူးမလောက်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ငါ့ဆီဖုန်းခေါ်ပါကွာ” ဆိုပြီး သီချင်းစာသားတွေရွတ်တော့တာပါပဲ။ ဂျက်ဖ်စန်ရဲ့ Call Me Maybe သီချင်းကို ဖုန်းထဲကနေ ဆာဖီနာ အကုန်ဆိုပြပါလေရော” လို့ အက်ဖလက်က ဖြေခဲ့တယ်။ အက်ဖလက်ကတော့ သူ့ရဲ့ ၃ နှစ်သမီးလေးက ပေါပ့်ဂီတလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေတာကို အလန့်လန့်အဖြတ်ဖြတ်နဲ့ကို သဘောကျပါတယ် လို့ ဆိုတယ်။ "အဖေတစ်ယောက်ရဲ့ အလုပ်တွေက အများကြီးပါပဲ။ ဒီကလေး ၃ယောက် က တကယ့် အရူးအပေါလေးတွေ။ သူတို့အချင်းချင်း လုံးထွေးသတ်ပုတ်ကြတယ်။ နှိပ်စက်ကလူပြုကြတယ်" လို့ ရယ်ရယ်မောမော ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ ဘန်အက်ဖလက်ခ်နဲ့ ဂျနီဖာဂါနာ တို့မှာ သမီးကြီး ဗိုင်အိုလက်၊ သမီးငယ် ဆာဖီနာ နဲ့ သား ဆမ်မြူရယ် ကလေးသုံးယောက်ရှိကြတယ်။
အဲလ်ဗစ် ရဲ့ ဘီဗာလီဟေးလ်စ် စံအိမ် ရောင်းချတော့မယ်
Rock n Roll ဘုရင် အဲလ်ဗစ်ပရက်စလေနဲ့ ဇနီး ပရက်စီလာ တို့ အရင်က ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ ဘီဗာလီဟေးစ် စံအိမ်ကို ဒေါ်လာ ၁၂.၉သန်းနဲပ ရောင်းချတော့မယ် လို့ ဈေးကွက်မှာ ကြေညာလိုက်ပါပြီ။ အဆောက်အဦးရောင်းဝယ်ရေး တာဝန်ခံ ထရူလီယာက ဈေးကွက်မှာ လူကြိုက်များနေပါတယ်လို့ ဆိုတယ်။ အဲလ်ဗစ်ရဲ့ Memphis က Graceland စံအိမ်လိုပဲ အဲလ်ဗစ်ရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေဟာ အိမ်ကြီးထဲကို အလည်အပတ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အိပ်ခန်းက လေးခန်း၊ ရေချိုးခန်း ငါးခန်းပါရှိတဲ့ ပြင်သစ်ဘုရင်ခံတွေရဲ့ စတိုင်လ်စံအိမ်ဟာ ၁.၁၈ ဧကရှိတယ်။ အဲလ်ဗစ်ပရက်စလေ အင်တာပရိက်စ်ရဲ့ သတင်းအရ ပရက်စလေဟာ ၁၉၆၇ မှာ အဲလ်ဗစ်နဲ့ ပရက်စီလာတို့ စုံတွဲ အိမ်မ၀ယ်ခင်မှာ အဲလ်ဗစ်ဟာ ပထမတော့ အိမ်ငှားရမ်းနေထိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုတယ်။ အဲလ်ဗစ်နဲ့ ပရက်စီလာတို့ ကွာရှင်းပြီး နှစ်များစွာကြာတဲ့နောက် အဲဒီအိမ်ကို ရောင်းချခဲ့ပါတယ် တဲ့။
၂၀၁၂ ရဲ့ အလှဆုံးဖက်ရှင်တွေဆိုတာ
လတွေတစ်လချင်းစီ ဖြိုချပြီး ၂၀၁၂ နှစ်ကုန်ပိုင်းကာလဆီကို တရွေ့ရွေ့ခရီးနှင်လာလိုက်တာ။ သိပ်မကြာပါဘူး ၂၀၁၂ ဆိုတာ ပြီးဆုံးသွားပါတော့မယ်။ မပြီးဆုံးပဲ တသသကျန်နေရစ်မယ့်အရာတွေမှာ နှစ်အလိုက် အလှပဆုံးဝတ်စားဆင်ယင်ခဲ့ကြတဲ့ နုနုလှလှ တောက်တောက်ပပ ချစ်စဖွယ်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းလေးတွေပါ။ တစ်နှစ်စာသိမ်းထားတဲ့ ဒီဇိုင်းစတိုးထဲမှာ အပြည့်စုံဆုံးဝတ်စုံလေးတွေ ပြန်ပြီးထုတ်ကြည့်ရအောင်ပါ။ ဒီနှစ်အတွက် အမှတ်ရစရာအကောင်းဆုံး ဒီဇိုင်းတွေ ဘယ်သူတွေများ ၀တ်ဆင်ခဲ့ကြပါသလဲတဲ့။ EL LOOK က ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ကောဇောနီပေါ်က လက်တင်သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ ၂၀၁၂ အကောင်းဆုံး အ၀တ်အစားပိုင်ရှင်တွေက ဆိုဖီယာဗာဂါရာ၊ ဂျနီဖာလိုပက်ဇ်၊ ပန်နီလုပ်ခရုဇ်၊ ဂျက်စီကာအယ်လ်ဘာ၊ ဆဲလ်မာဟေးယက်ခ်၊ ဆဲလီနာဂိုးမက်ဇ်၊ အီဗာလွန်ဂိုရီရာ၊ ဇိုးစယ်ဒါနာ၊ ကင်မရွန်းဒိုင်ယက်ဇ်၊ နီကိုးလ်ရီချီ၊ အီဗာမန်ဒါ့စ်၊ ဒီမီလိုဗာတို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဆိုဖီယာဗာဂါရာ ရဲ့ ပြာလဲ့လဲ့ တလက်လက်တောက်နေတဲ့ ၀တ်စုံ၊ ဂျက်စီကာအယ်လ်ဘာရဲ့ ရွှေရောင်ဝတ်စုံ၊ ဆဲလ်မာဟေးယက်ခ် ရဲ့ စိမ်းပြာရောင်၊ ခဲသားရောင် ၀တ်စုံတွေကို ဖက်ရှင်ချစ်သူတွေက အမြဲတမ်းအတွက် အကြိုက်ဆုံးပါပဲ တဲ့။ ရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ်။
ဂီတသမား ရဲ့ ရောင်းဈေး စံချိန်ချိုးလိုက်တဲ့ ပန်းချီကား
ရောခ့်ဂန္တ၀င် ဂီတသမား အဲရစ်ကလက်ပ်တန် စုဆောင်းထားတဲ့ ဂျာမန်ပန်းချီဆရာ Gerhard Richter ရဲ့ Abstract ပန်းချီကားကို ရောင်းချခဲ့တဲ့အခါ ဒေါ်လာ ၃၄.၂သန်း(ပေါင် ၂၃.၈သန်း)ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပန်းချီကားဈေးနှုန်း ရောင်းဈေးတွေထဲမှာ မှတ်တမ်းတင်လောက်အောင် မြင့်မားတဲ့ဈေးနှုန်းပါ။ လန်ဒန် Sotheby လေလံအဆောက်အဦးမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မူလက အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းထားတဲ့ဈေးနှုန်းမှာ ဒေါ်လာ ၁၉ သန်းပါ။ ဒါပေမဲ့ အမည်မဖော်လိုသူ ပန်းချီကားဝယ်ယူသူတစ်ဦးက ငါးမိနစ်အတွင်းမှာပဲ ဒေါ်လာ ၃၄.၂သန်း ဈေးနှုန်းပေးပြီး ၀ယ်ယူသွားခဲ့တယ်။ အဲရစ်ခ်ကလက်ပ်တန် အတွက် အကျိုးအမြတ် များများစားစားရလိုက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကလက်ပ်တန် ၂၀၀၁ မှာ ၀ယ်ယူခဲ့တုန်းက ဒေါ်လာ ၃.၄ သန်း နဲ့ပဲ ၀ယ်ယူခဲ့တာပါ။ အသက်ရှင်ဆဲပန်းချီပညာရှင်ရဲ့ လက်ရာကို ဒီလိုဈေးအမြင့်ဆုံးနဲ့ ရောင်းနိုင်တာဟာ ပထမဆုံးပါပဲ လို့ ဆိုကြတယ်။ အသက် ၈၀ ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဂျာမန်ပန်းချီဆရာကြီး Gerhard Richter ဟာ Cologne မှာ လက်ရှိနေထိုင်ပါတယ်။ ဒီပန်းချီကားကို ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာ ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ ဆီဆေး Abstrat ပန်းချီးကားဖြစ်ပြီး ကလက်ပ်တန်က “စီစဉ်တွက်ချက်ထားတဲ့ ကစဥ့်ကလျားဖြစ်မှုတွေ ရဲ့ အပြောင်မြောက်ဆုံးလက်ရာ” လို့ ဖွဲ့ဖွဲ့နွဲ့နွဲ့ဆိုတယ်။ အဲရစ်ကလက်ပ်တန်ဟာ လူသိများတဲ့ ပန်းချီကားစုဆာင်းသူတစ်ဦးပါ။ ။